Akka natti fakkaatutti, Obbo Lammaan Oromoo hin ganne. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAkka natti fakkaatutti, Obbo Lammaan Oromoo hin ganne.
Abiy Ahmad waliin dhaabachuu akka dide sirriitti mul’ata. Akka inni Abiy waliin jiru fakkeessuuf yaaliin hedduun godhamus diduun isaa ifa jira.
Maaltu isa callisiise? Miidiyaalee biyyattii irraa ugguramuun waan beekkamu. Maqaan Lammaa miidiyaa irratti akka hin dhahamne sadarkaa akeekkachiisan irra gahan. Uggurri kun miidiyaa mootummaarratti akka hin mul’anne godhe.
Miidiyaalee biroo irratti hoo maaliif hin mul’anne? Dubbiin obbo Lammaa dhiibbaa guddaa akka fidu haasawa VOA irratti daqiiqaa 10 godhe sun ragaadha. Ammas yoo bahee dubbate dhiibbaa guddaa fiduu danda’a. Dhiibbaa inni fidu kana qabsoof itti gargaaramuuf qophiin jiraa? Yoo dhiibbaa inni fidu bu’aatti hin jihhiirre miidhaa akkamii qaba? Kunis gama hedduun xiinxalamuu danda’a.
Gama kaaniin namni kun akka salphaatti sirna kana Nafxanyaaf dhiisee keessaa bahuun bu’aa qabaa? Hanga isaan ifatti keessaa ari’anii eeguu wayya moo ofumaaf keessaa deemuu wayya? Yoo keessa bahee akka mormituutti falmuuf tahe ammatti haalli mijataadhaa?
Dubbiin obbo Lammaa wal xaxaadha. Namni kun ammas Oromoof jedhee mataa gadi qabatee callise. Akka warra garaa achii as ummatatti garagalee ummata isaa hin mufachiifne. Callisa isaatu ummata mufachiisaa jira. Callisni isaa kun ammoo xaxaa hedduu of keessaa qaba.
Namootni heddun akka sabaatti dhiisanii akka dhuunfaatti jiruu ofii fooyyeffachuuf yaaduutu Oromoo gabrummaa jalatti hambise. Gaafa waan barbaadan argatan akkuma waan ummatni hundi akka isaaniitti waan barbaadan argatanitti dubbatu. Qabsaawota sakaalu. Kanatu qabsoo Oromoo danqaa jira. Rakkoo jireenyaa hubattee Bilxiginnaan ilmaan Oromol hedduu maallaqaan bitte. Kunis yeroof malee hin dalagu. Hanga ummatni waliigalatti gabrummaa jalaa bahutti nama muraasa bitanii ummata guddaa gadi qabuun abadan itti fakkaata malee galma hin gahu. Warri bitaman ammoo mataan nyaatamaa garaan raafamaa jiraachuun jiruu miti. Osoo itti yaadanii gaarii!
Gummaa baasi says:
Lamman Abiy duukaa ta’a jedhe hin yaadu. Sababiin isaas akkana. Dinagade Qusi, ministeera ittisaa mootii habashaa ture. Jaqnummaa qabunis habashaa hedduu tajajilee ture. Habashooni yeroo millaan dhabachuu isanii baratani, dhumma irratti garuu, Dinagde Qusi dhaan muratani akka dhala hingodhane tasisani. Obbo Lammaan immoo akkuma Dingadee ministeera ittisaa ta’u iyyu, nama jabanaa (kan barate seenaa beeku) waan ta’eef Abiyyiin (habashoota) millaan dhabee ofii isaa immoo aarsaa gatii seena hinqabne akka ta’uuf eeyyamama natti hinfakaatu. Yoo du’es Oromummaa isaaf falmatee seenaa mo’ichaa waan fudhatu jedheen yaada.